स्वस्थ्य बन्न दैनिक कति पानी पिउने ? – Jagaran Nepal
स्वस्थ्य बन्न दैनिक कति पानी पिउने ?
नियमित रुपमा मिलाएर पानी पिउँदा पनि तन्दुरुस्त हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन्। चिकित्सकहरुका अनुसार एकजना स्वस्थ्य व्यक्तिले दैनिक कम्तिमा दुई लिटर हाराहारीमा पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ।तर, यसरी पानी पिउँदै गर्दा शरीरको वजनमा पनि भर पर्छ । त्यसो भए कति वजन भएका मानिसले कति पानी पिउने त ?
शरीरको तौल अनुसार पानीको मात्रा फरक-फरक
शुरुमा आफ्नो शरीरको तौल कति छ थाहा पाउनुस् । अनि शरीरको तौललाई ३० ले भाग गर्नुहोस् । त्यसो गर्दा भागफल जति आउँछ त्यति नै बराबरको लिटर पानी पिउन शुरु गर्नुहोस् । उदाहारणको लागि तपाईंको तौल ६० किलो छ भने तपाईंले दिनमा २ लिटर पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी ८० किलो तौल भएका मानिसले २।६ लिटर पानी पिउनु पर्छ ।
व्यायामको समयमा धेरै
तपाईंले व्यायाम गरिरहनु भएको छ भने त्यो समयमा तपाईंको शरिरबाट धेरै पसिना बग्छ । त्यसका कारण शरिरमा पानीको मात्रा कमी हुन जान्छ । यसरी पानीको मात्रा कमी हुँदा सुख्खापन हुने मात्र नभई यसले पाचन प्रणालीमा समेत समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि व्यायाम गरिसकेको आधा घण्टामा कम्तीमा पनि एक गिलास पानी अवश्य पिउनुपर्छ ।
यसका साथ साथै फलफुल तथा जुस पनि शरीरका लागि आवश्यक पर्छ । हुन त शरीरको लागि आवश्यक पानीको मात्रा पूरा गर्न पानी नै मात्र पिउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । यसका लागि अत्यधिक पानीको मात्रा पाईने फलफूल तथा अन्य खानेकुरा पनि सेवन गर्न सकिन्छ । शरीरमा २०/२५ प्रतिशत पानी हामीले खाने खानाहरुबाट प्राप्त हुन्छ । जस्तै एउटा स्याउमा ११६ मिलि लिटर पानी हुन्छ । त्यस्तै खरबुजा, सुन्तला जस्ता फलफूलमा पनि प्रशस्त पानी पाइन्छ ।